Bakhala ngezigebengu ze-whoonga KwaMpande | News24
Bakhala ngezigebengu ze-whoonga KwaMpande
ISITHOMBE:thabang mathebula Umphakathi wakwaMpande ubhikishe ngaphandle kwenkantolo kamantshi ngoMsombuluko ukuzoseka ozakwabo abasolwa ngokushaya babulaleisigebengu kule ndawo. Lo mphakathi ukhala ngobugebengu obudlangileosebuphenduke insakavukela umchilo wesidwaba kule ndawo.
UFUNA kungenelele uMnyango wezokuPhepha nokuXhumanisa noMphakathi umphakathi wakwaMpande okhala ngokuhlaliswa lubhojozi izigcwelegcwele ze ‘whoonga’ kule ndawo.
Lo mphakathi obuwotha ubomvu ubhikishe ngaphandle kwenkantolo kamantshi ngoMsombuluko kulandela ukuboshwa kwamalunga omphakathi ayisithupha asolwa ngokushaya abulale okuthiwa uyisigebengu ngesonto eledlule. Elinye lamalunga omphakathi elikhulume nephephandaba i-Echo elingathandanga ukudalulwa lithe umphakathi usukhethe ukuzibambela umthetho ngenxa yokuthi amaphoyisa afika kade, kanti nobugebengu kule ndawo sebuphenduke insakavukela umchilo wesidwaba.
Uthe: “Kulesi sigodi sakwaMpande sifile ubugebengu njengoba ukugqekezwa kwemizi yabantu, ukuntshontshwa kwezinto, ukubulawa kwabantu nokunukubezwa ngokocansi kudla lubi. Zonke lezi zigameko zenziwa abafana abakhona la endaweni abagxike kakhulu esidakamizweni esaziwa nge ‘whoonga’.
“Ngesonto eledlule umphakathi ushaye wabulala omunye umfana osolwa ngokugqekeza antshontshe kweminye imizi kule ndawo. Njengoba besibhikisha ngaphandle enkantolo, sifuna kudedelwe abasolwa njengoba sonke njengomphakathi sibambe iqhaza ekushayeni lesi sigebengu.”
Induna yendawo uMnu Khulekani Hadebe uthe bakhathele izigcwelegcwele eseziphendule le ndawo yaba kampunzi edl’emini. Uthe emva kokuboshwa kwalabasolwa, umphakathi uke wamashela esiteshini samaphoyisa iTaylor’s Halt uyozwakalisa ukukhathazeka kwawo.
Uqhube ngokuthi bazimisele ngokuhlangana nezinhlaka ezihlukene ukuze babonisane ukuthi bangalwa kanjani nalesi sihlava esibi sokusetshenziswa kwewhoonga kule ndawo.
“Siwumphakathi sithi sekwanele ukugqekezwa kwemizi yabantu nokubanjwa inkunzi ilezi zigebengu zewhoonga. Siyafisa ukuba kungenelele uMnyango wezokuPhepha nokuXhumanisa noMphakathi ukuze ulekelelane nesiteshi samaphoyisa iTaylor’s ukulwa nalesi sihlava,” kuphetha uHadebe.
Laba basolwa abayisithupha badedelwe ngawo uMsombuluko ngebheyili. .